शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएका छौं | गृहपृष्ठ
Home विकास शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएका छौं
विकास 46 views
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएका छौं
पदम बडुवाल नगरप्रमुख बडिमालिका नगरपालिका, बाजुरा
स्थानीय तह निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिले स्थानीय विकासको जिम्मेवारी लिएको पनि करीब ८ महीना पुग्यो । सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा कार्यालय व्यवस्थापनदेखि कर्मचारी समायोजनको चरणमा रहेका स्थानीय तहले विकासको गति कायम गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन भए पनि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका बेला स्थानीय सरकारले के गर्दै छन् त ? बाजुराका अन्य स्थानीय तहभन्दा व्यवस्थित र पुरानो नगरपालिकासमेत रहको बडिमालिका नगरपालिकाको विकास, निर्माणको अवस्थालगायत विषयमा नगरप्रमुख पदम बडुवालसँग आर्थिक अभियानका वीरबहादुर विष्टले गरेको कुराकानीको सार :
स्थानीय तहमा अहिले के कस्ता काम हुँदै छन् ?
जिल्लाको पुरानो नगर र सदरमुकाममा समेत रहेका कारण अन्य स्थानीय तहभन्दा यस नगरपालिकामा भौतिक पूर्वाधार पक्ष सबल छ । हाम्रो आफ्नै भवन निर्माणाधीन भए पनि नगरपालिकाकै भवनमा केही कार्यालय सारिसकेका छौं । अहिले योजना कार्यान्वयनको चरणमा छौं । भदौ २५ गतेको नगरसभाले पारित गरेको यस आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि योजनाको प्राविधिक प्रतिवेदन बन्दै छन् । वडापालिकाहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामका लागि उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छन् भने केही उपभोक्ता समितिले कार्य प्रारम्भसमेत गरिसकेका छन् ।
अहिलेसम्म प्राविधिक प्रतिवेदन बन्दै छ भन्नुहुन्छ, सकिन्छ त बजेट कार्यान्वयन गर्न ?
यो वर्ष हामीलाई मात्र होइन, ७ सय ५३ ओटै स्थानीय तहलाई यही प्रश्न छ । तर पनि हामीले जिल्ला सदरमुकाममा उपलब्ध प्राविधिक कार्यालय, समन्वय समिति, सङ्घ/संस्थाहरूसँग प्राविधिक सहयोग लिएर सबै उपभोक्ता समितिको प्राविधिक प्रतिवेदन तयार पारी योजना सम्झौताको चरणमा छौं । कर्मचारी समायोजन चरण नसकिएका कारण दुई कर्मचारी ( प्रशासकीय प्रमुख र लेखा अधिकृत)को भरमा प्रशासनिकदेखि योजना निर्माणका काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । उपभोक्ता समिति र अन्य सरोकारवालको सहयोग रह्यो भने विकास निर्माणलाई द्रुत गतिमा लैजाँदै वैशाख मसान्तसम्म अधिकांश योजनाको काम सक्छौं ।
८ महीनामा यो यो काम भए भन्न मिल्छ ?
मिल्छ । नमिल्ने कुरै भएन नि । हामी निर्वाचित भएर आएपछि बीचमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा करीब १ महीनाबाहेक नगरकै काममा छौं । यस वर्ष पहिलो चरणमा जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीमा केन्द्रित छौं । खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले काम शुरू भइसकेको छ । खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई नगरपालिका मातहत राख्नेगरी कार्यालय पनि नगरपालिकामै राख्न लगाई खानेपानीको समस्या समाधानमा लागिपरेका छौं । धारा सर्वेक्षण र मर्मत भएपछि संस्थागत रूपमा खानेपानी वितरण गरिनेछ । अबको १ वर्षमा ‘मेयर साप पानी आएन’ भन्ने फोनको आउनेछैन ।
सदरमुकामभित्र यही वर्ष जिल्ला वन कार्यालयदेखि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसम्म, गौडा डिलदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म र कारागारदेखि बसपार्कसम्म निर्माण हुनेछन् । सडक निर्माणको प्रारम्भका लागि प्राविधिक प्रतिवेदनसँगै सरोकारवालाहरूसँगसमेत छलफल भइरहेको छ । हामी सडकविनाको घरमा बस्ने कि सडक भएको घरमा बस्ने भन्ने प्रश्न जग्गाधनी/घरधनीलाई गरिरहेका छौं । मार्तडीका डाँडादेखि थापावाडा, बजारका गल्ली/गल्ली, गैरीबजारलगायत ठाउँमा मोटर, दमकल, एम्बुलेन्स पुग्न सक्ने बनायौं सुविधा त यहीँका बासिन्दालाई हुने हो नि ।
यसरी नै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारी यस वर्षका प्राथमिकता हुन् । पहिलो वर्षमा हामी यिनै आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिमा केन्द्रित छौं । जलविद्युत् अर्को समस्या रूपमा छ । जापान सरकाले २० वर्षका लागि बनाइदिएको २ सय किलोवाट विद्युत् आज २८ वर्षसम्म चलिरहेको छ । यसको विकल्प तत्काल खोज्नुपर्ने भएकोले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग ५ सय किलोवाट बत्तीका लागि कुरा गरिरहेका छौं । अनाइखोला, कोर्दाली गाडमध्ये कुनै एक ठाउँमा सिँचाइ सुविधासमेत पुग्नेगरी बिजुली उत्पादनको गृहकार्यमा छौं ।
श्रम बजारमा दिनदिनै सयौं सङ्ख्यामा युवा श्रमशक्ति प्रवेश गरिरहेका छन् । नगरले युवा रोजगारीसम्बन्धी के योजना बनाएको छ ?
हाम्रा युवालाई काम होइन, रोजगारी चाहिएको छ । हिजोजस्तो तोक आदेश गरेर रोजगारी दिन सकिने अवस्था छैन । अब हामी युवालाई स्वरोजगार बनाउँछौं । लगानीको सुरक्षण गरिदिन्छौं । बजार तयार पारिदिन्छौं । उनीहरूले काम गर्नुपर्‍यो । कृषि पेशामा करीब ८९ दशमलव ९ प्रतिशत मानिस संलग्न रहे पनि हामी दाल–चामलदेखि तरकारीसम्म तराईको भरमा परेका छौं । प्रशस्त कृषियोग्य जमीन भएर पनि बाँझै राखेर अर्काको गुलामी गर्न खुशी हुन्छौं । तर, घरमा फलेको तरकारी मार्तडीमा बेच्न लजाउँछौं । तपाईं आफै भन्नुस् अनि स्वरोगार कसरी बन्न सक्छौं ? हाम्रो शास्त्रले उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार भनेको छ । आयआर्जनको प्रधान स्रोत नै कृषि हो, तर पनि हामी त्यही पुरानो ढङ्गबाट खेती गरिरहँदा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौं । कृषिमा हाम्रो माटो सुहाउँदो बीउ, नगदेबाली, मसलाबाली जस्ता एकल र व्यावसायिक ढङ्गबाट उत्पादन गर्नेतिर लाग्न जरुरी छ । हाम्रा युवा मिलेर व्यावसायिक तरकारीखेतीको योजना र आँटसहित आउनुपर्‍यो, उहाँहरूलाई कुन ठाउँमा के सहयोग गर्नुपर्छ, हामी तयार छौं । मार्तडीमा यतिका धेरै बैङ्क छन्, सहकारी छन्, म आफै गएर उनीहरूसँग कुरा राखिदिन्छु । कृषि विकास बैङ्कले जम्मा ६ प्रतिशतमा ऋण प्रदान गर्दछ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको पनि करोडौं रकम कृषि कर्जामा लगानी हुन सकेको छैन । दृढ सङ्कल्पका साथ यही व्यवसाय गर्छु भनेर लाग्यौं भने के हुँदैन ? हाम्रा ९ वडाका प्र्रतिवडा पाँचजनाका दरले समूह बनाएर व्यावसायिक उत्पादन गर्छौं भनेर आउनुहोस्, यस आर्थिक वर्षमा ४५ जनालाई व्यावसायिक बनाउँछौं भनेका छौं । बजारको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा, सकिनसकी हामीलाई सामान ल्याउने ट्रक रित्तै फर्किन्छन् । त्यसमा भरेर पठाउने चीज उत्पादनमा लागौं । मार्तडीमा कृषि बजारको व्यवस्था गर्ने गृहकार्य हुँदै छ ।